Muhaajiriin ka socda 5 dal oo 4 maalmood oo safar ah kadib gaadhay Malta. [Akhris …] – Radio Daljir
Muhaajiriin ka socda 5 dal oo 4 maalmood oo safar ah kadib gaadhay Malta. [Akhris …]
Luulyo 26, 2009 12:00 b 0
Malta, July 26 – Muhaajiriintii labaad ee muddo toban maalmood gudahood ah gaadha Jasiiradda Malta oo u badan Soomaali ayaa xalay waddankaasi galay.
Dadkan oo ka tacabbiray xeebaha waddanka Liibiya ayaa ka koobnaa 44 ruux waxana intii ay safar biyoodkooda oo qaatay 4 maalmood oo ay ka tallaabayeen badda Madditarenian-ka ay ku gudajireen dhintay nin ka mid ah ahaa musaafiriintaasi.
Doonida ay dadkani ku safrayeen ayaa aad uga yarayd xaddiga dad ee ku safrayay, waxana dharar ahaan ay doonidani gaadhaysay 30 cagood.
Booliska magaalada Marsascala ee jasiiraddaasi Malta ayaa galay dhisme ay dadkani ku jireen, kuwaas oo loo qaaday xero lagu haynayo dadkaasi.
28 ka mid ah dadkan ayaa Soomaali ah 6 ka mid ahna waa dumar, dadyowga kale ee ka mid ahaa muhaajiriintan ayaa u kala dhashay dalalka Mali, Ivory Coast, Gambia iyo Guinea.
Dowladda Malta ayaa sheegtay in tiradii ugu yarayd ee muhaajiriin ah ay gaadheen dalkeeda tan iyo sannadii 2003da, taasuna waxa la sheegey in ay ka dambaysay markii ay dowladaha Talyaaniga iyo Libiya oo iska kaashanaya joojinta dadka u taallabaya qaaradda Yurub ay Roma kaga fal celisay in ay dib u soo celiso dadka waddankeeda u tallaabayay dalka Liibiyaa oo ay ka tacabiraan.
Toddobaadkii horena madaxa caddaaladda ee midowga Yurub ayaa Talyaaniga uga digay in ay dib u celiyaan dadka ka soo hayaamay dhibaatooyin ku soo wajahay dalalkooda. Faransiiskuna waxa uu dhawaan aqbalay muhaajiriin xaaladohooda la danayn waayay oo ku sugnaa jasiiradda Malta.
Sannadkan 2009-ka waxaa waddanka Malta gaadhay 8 doomood oo siday 929 qof oo muhaajiriin ah, halka sannadkii hore ee 2008dana ay dalkaasi galeen 56 doomood oo siday 1690 ruux oo tacabirayaal ah.
Ciidanka bilayska Puntland oo qabtay gaari nooca xamuulka ah oo siday khamri.